दसैंमा यसपालि कस्ता लुगाको माग... :: तरुनिका महतो :: Setopati
दसैंमा यसपालि कस्ता लुगाको माग धेरै?
तरुनिका महतो काठमाडौं, असोज १७
तरुनिका महतो। तस्बिरः निशा भण्डारी/सेतोपाटी
काठमाडौंको रमझम र सजावट हेर्दा दसैंको रौनक झल्किरहेको प्रस्टै हुन्छ। किनमेलको चटारोसँगै मान्छेको दौडधुप र बजारमा भिडभाड बढेको छ।
यो रमाइलो माहोलमा परिवारसँगको भेटघाट र मिठोमसिनो खानपिन गर्ने इच्छा कसको नहोला! अझ नयाँ लुगा किनमेलबिना त दसैं रमझम अधुरै।
दसैंमा नयाँ लुगा किन्ने र लगाएर टिकाजमरा थाप्ने रहर बच्चादेखि पाका उमेरसम्मकालाई हुन्छ। र, यो चलन उहिल्यैदेखि हो। उति बेला अहिलेजस्तो पसलपिच्छे लुगा पाइँदैन थियो। गाउँघरमा त झन् परको कुरा। हाम्रा हजुरआमा-हजुरबुबाका कुरा सुन्ने हो भने पनि पहिले-पहिले नयाँ लुगा लगाउन दसैं नै कुर्नु पर्थ्यो। किन्न सहरै धाउनु पर्थ्यो।
अहिले लुगा किन्न दसैं पर्खनु पर्दैन। तै पनि दसैंमा नयाँ लुगा किन्नुको मजै बेग्लै।
तर, चाडपर्व नजिकिएसँगै बजारमा अनेक थरीका लत्ताकपडा भित्रिन्छन्। पहिरन र डिजाइनबारे धेरै ज्ञान नहुँदा सर्वसाधारण कस्तो लुगा लगाउने भनेर अलमलमा पर्न सक्छन्। त्यसमाथि पनि बजारको मूल्यले आकाश छोइरहेको बेला कम गुणस्तरको कपडा किन्ने जोखिम कोही उठाउन चाहँदैनन्।
यस्तो समयमा ग्राहकलाई दसैंको पहिरनबारे सल्लाह सुझाव दिने मान्छे पनि हुँदैनन्। यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै सेतोपाटी संवाददाता अनुषा अधिकारीले फेसन डिजाइनर तरुनिका महतोसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
दसैंमा यसपालि कस्ता लुगाको माग धेरै छ?
अहिले गर्मीबाट एकाएक चिसो हुन थालेको छ। जस कारण ग्राहकहरू के लुगा लगाउने भनेर अलिकति अलमलिनु भएको छ। चाडपर्वको मौसम भएकाले फ्यान्सी लुगाको माग धेरै भए पनि यसपालि प्रायः बाक्लो लुगा नै खोजिरहनु भएको छ।
चाडवाडमा कस्ता डिजाइनका लुगाको आकर्षण हुन्छ?
महिलाहरू कुर्ता, सारी र सारारामा आकर्षित छन् भने पुरुषहरू सुरुवाल कमिज र दौराको अर्डर दिइरहेका छन्। युवाहरूले जिन्स भन्दा फर्मल लुगा लगाउन रुचाएका छन्। अरु समयमा नलगाए पनि चाडवाडमा यस्ता सामान्य फर्मल लुगाको आर्कषण धेरै छ।
पहिले पहिले भन्दा फर्मल लुगामा आकर्षण बढेको हो?
अरू बेला सधैं जिन्स लगाउने हुनाले केटाकेटीले चाडपर्वमा कुर्ता सुरुवाल लगाउन रुचाएका हुन्। परिवारसँगै बसेर चाडवाड मनाउँदा फर्मल लुगा सुहाउने र लगाउँदा पनि सहज हुने भएकोले अचेल यिनै पहिरनमा देखिन्छन्। पछिल्लो समय आफैंले चाहेको डिजाइनमा सहजै उपलब्ध हुनाले पनि फर्मल लुगाको बजार फस्टाएको हो।
यो वर्ष लत्ताकपडाको बजार मूल्य बढेको छ?
अघिल्ला वर्षहरू जस्तो धेरै छैन। जाडो मौसम चाँडै नजिकिएका कारण पसलहरूमा गर्मीका लुगाको 'स्टक' सक्काउने हतारो भएको छ। त्यसैले दसैंको माहोल पारेर व्यापारीले सस्तोमा कपडा बेचिरहेका छन्। कहीँकहीँ मूल्यमा धेरै छुट पनि छ। यसले दसैं लुगालाई धेरै महँगो बनाएको छैन।
तपाईंले यतिका वर्ष भयो बुटिक सञ्चालन गर्नुभएको, बाहिरी पसलको तुलनामा बुटिकमा कपडाको गुणस्तर र मूल्यमा के भिन्नता हुन्छ?
लुगाको गुणस्तर हेर्ने हो भने बुटिक र बाहिरी पसलमा ठूलो भिन्नता छ। बुटिकको कपडा डिजाइनरको सल्लाहअनुसार ल्याइएको हुन्छ। त्यहाँ कपडा किन्दा पनि धेरै प्रकारका हुन्छ भने ग्राहककै नाप र डिजाइनअनुसार तयार हुन्छ। यसको मतलब कपडाको मूल्य चर्को हुन्छ भन्ने होइन। बजारी भाउभन्दा धेरै फरक हुँदैन। यसैले बुटिकमा कपडा किन्दा ग्राहकलाई फाइदै हुन्छ।
दसैंमा कस्ता कपडा किन्न सुझाउनु हुन्छ?
बजारमा ट्रेन्डमा आएका लुगाको पछि लाग्नु भन्दा पनि आफ्नो शरीरमा सुहाउने र सजिलो हुने लुगा लगाउनुपर्छ। फेसन परिवर्तन हुने भनेको आफ्नो शरीरको सहजता अनुसार हो र ट्रेन्ड पनि त्यसैअनुसार फेरिन्छ। आरामदायी लुगाले तपाईंलाई असहज गराउँदैन र अनुहारमा आत्मविश्वास बढेको भाव झल्किन्छ। सहज पहिरनले हाम्रो व्यक्तित्वमा पनि ठूलो प्रभाव पार्छ। फेसनको मूल अर्थै यही हो। शरीरलाई अप्ठ्यारो हुने लुगा छ भने त्यसको ट्रेन्ड धेरै समय रहँदैन।
पछिल्लो वर्षको तुलनामा ग्राहकको रोजाइमा के नयाँ परिवर्तन आएको छ?
पछिल्ला दसैंहरूमा लुगा किन्दा वर्षभरमा एकपटक मात्र लगाउन मिल्ने लुगा किन्ने चलन थियो। चाडपर्वबाहेक प्रायः अन्य समय लगाउन असहज हुने र विशेष अवसरमा मात्र लाउन मिल्थ्यो। अहिले विपरीत भएको छ। दसैंसँगै अरू समयमा पनि लगाउन मिल्ने कपडा धेरै बिक्री भइरहेको छ। जुनसुकै अवसरमा लगाउँदा पनि सजिलो हुने र उत्तिकै सुहाउने सामान्य डिजाइनका लुगामा ग्राहकहरू आकर्षित छन्। यसले ग्राहकहरू आफ्नो पैसा राम्रोसँग लगानी गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
यसको मतलब अबको तिहारमा नयाँ डिजाइन आउँदैनन्?
तिहारका लागि अर्को छुट्टै डिजाइन आउँछ। मौसम चिसो हुने भएकोले दसैंमा किनेको लुगा तिहारसम्म लगाउन मिल्दैन। यसपालि तिहारमा बाक्ला र न्याना लुगाको माग हुन्छ होला।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १७, २०७६, १८:५५:००